Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment प्रिय वाँके तिम्रो खोसिएको खुशी फर्काउन म सधै तयार छु: चितामणी शर्मा पौडेल - Pnpkhabar.com
प्रिय वाँके !
यता म (सुर्खेत ) सन्चै छु। तिमी पनि सन्चै हाैला भन्ने कामना गरेकाे छु। तर आजकल तिम्रो वारेमा नराम्रो मात्रै समाचार सुन्दैछु। तिम्रो सान र साैकत वटाैलीले लिएछ, तिमीलाई थाङ्नाेमा सुताएर। २०७२ सालमा नेपालमा संविधानकाे घाेषणा भए देखि हाेला तिम्रो र मेराे सम्बन्ध विच्छेद भएको। तिमीले मलाई अविश्वास गरि अर्कै संग पिरती गासेपछि मलाई पनि तिम्रो वारेमा साेच्न फुर्सद मिलेन। तिमीसंगै रहदा पनि हामी वीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध वनेन।
तिमीलाई आफु सम्पन्न भएको र ठुलो भएको घमण्ड सधै रहिरह्याे।मेरो अस्थित्व स्वीकार्न तिमी कहिल्यै तयार देखिएनाै। म संग रहेकाे सुन्दरता,अवाेधपन, शालीनता र स्वाभिमानलाई तिमीले कहिल्यै स्वीकारेनाै। हुनत त राज्यका मालिकहरुले मलाई पनि सुदुरपश्चिम नमिसाएका हाेईनन। तर मेरा लालावालाहरुले निष्ठा पूर्वक जीवन मरणकाे लडाइँ गरि मलाई मुक्त गराए। केही सहिद वने, केही अपांग भएर वाचेका छन।
तिम्रा सन्तान भने सवै आवारा रहेछन । तिम्रो अस्थित्व लुटिदापनि चुप छन, रमिते वनेका छन ! मेरा सन्तान भएको भए आजसम्म ठूलो आन्दोलन भैसकेको हुनेथियाे, आमहडताल चक्काजाम, के के हाे के के ! मेराे ईज्जतका लागि लडिदिने ईमानदार सन्तान नभैदिएकाे भए आज म पनि वेचिएकी चेली जस्तै आजकाे तिम्रो हालतमा छटपटाई रहेको हुनेथिए।
दुई वर्ष अघिवाट त हाेनि तिम्रो मेराे सम्बन्ध विच्छेद भएको । त्याे भन्दा अघि त तिम्रो दिदी चिसापानी, भाइ काेहलपुर, हवल्दारपुर, राझा,कारकादाे र तिम्रो माइजू जमुना मलाई पनि आफ्नै लाग्थ्याे। सवै तिम्रा नातागोता ईष्टमित्र भाईभारदारले मलाई पनि निक्कै माया गर्थे।
सम्मान दिन्थे। तर आज ती सवै पराई जस्तो भैसके। यसमा तिम्रो ठुलाे दाेष छ। तिम्रो कारणले हाे हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको। तिमीले प्रदेश ५ काे नाममा पराई संग गासेकाे पिरतीमा आज ऐजेरु पलाएकाे छ। तिमी फगत एक्लो वनेकाे मात्रै छैनाै विचारा साेझाे वर्दियालाई पनि घर न घाटकाे वनाएका छाै। याे पापकाे भुक्तान तिमीले भविष्यमा गर्नै पर्नेछ।
तिमीलाई मैले के दिईन ! माया दिए, विश्वास दिए, गर्मीमा सितलता दिए, जाडाेमा न्यानाे दिए। तिमीलाई हिउदमा वाक्लाे हुस्सुले छाेप्दा न्यानाे दिए, गर्मीयाममा खलखली पसिना वग्दा हर्रे र देउरालीकाे सीतलता दिए। वर्खामा तिमी रुदा आखा पुछ्ने हात्तीसारकाे पछ्याैरी दिए। तिमीलाई भेरी र कर्णालीकाे एकलौटी व्यापार दिए।
कहिलेकाही तिम्रो वाटाे हुदै आउने अराष्ट्वादलाई माफी दिए। पानी दिए, जडिबुटी दिए, काईनेटिक पत्थर दिए,जुम्लाको स्याउ र सिमी दिए, दैलेखकाे सुन्तला दिए, हुम्ला र डाेल्पाकाे च्याङगा् दिए, मुगुकाे रारा दिए, डाेल्पाकाे से फाेक्सुण्डाे दिए, कर्णाली दिए, भेरी दिए तरपनि तिमी म प्रती सकारात्मक भएनाै।
तिमी कहिलेपनि म प्रती सकारात्मक तवरले पेश भएनाै। मैले विश्व विध्यालय मागे तिमीले त्यहि भाजाे हाल्याै। अदालत मागे त्याे पनि राेक्न जाेडले लाग्याै। मेरा क्षेत्रीय कार्यालयहरु मसंग आउन दिएनाै। विकास राेक्याै, तेलपानी सडक वन्न दिएनाै। अरु कति कती राेक्याै हिसावै भएन।
जे भएपनि जस्तो भएपनि तिमी र मेराे सम्बन्ध अतुलनीय छ, पुरानो छ, कसैसँग तुलना गर्न नमिल्ने छ। आउ सवै कुण्ठा छाेड, रिस छाेड, घमण्ड छाेड। मिलाै ।४०० किमि टाढाकाे वटाैली छाेड । हाम्रो सम्बन्ध पुनर्स्थापित गराै, मिलाै अघि वढाै। तिम्रो खाेसिएकाे खुसि फर्काउन म तिमीसंग हातेमालो गर्न तयार छु। पराईसंगकाे नाता ताेड आउ आलिङ्न गराै, अघि वढाै।
उहि तिम्रो प्याराे